Pakistana : Mbola Velona Hatrany i Saadat Hasan Manto, Ilay Mpanoratry Ny Vanim-potoana Fitsinjarazaràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2012 11:43 GMT
Saadat Hasan Manto (1912-1955) dia mpanoratra sombin-tantara, mpanoratra tantara foronina ary koa mpandika teny avy any Punjab. Ankehitriny mankalaza ny faha 100 taonany ny mponina avy ao amin'ny soba kaontinanta tamin'ny fanindrahindrana ny maha olo-manan-danja azy eo amin'ny fitsinjaram-paritr'i India-Pakistana . Ny Kaonsilin'ny zavakanto Pakistana, fikambanan'ny mpanao gazety, ary ny fikambanan'ny mpanoratra dia mikarakara mitabe ho fahatsiarovana ny lovany sy ny maha-olo-manan-danja azy eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny .
Fa mbola ilaina ve i Manto ankehitriny? Eny! Tena mbola ilaina tanteraka izy. Ny fanakianany ny fiarahamonina mpihatsaravelatsihy , ny fihetsiny manoloana ny fadifady ao amin'ny fiarahamonina sy ny fomba fiaina [ur], ary ny fitsikerany an'i Etazonia no mahatonga azy ho angano velona . Manto, hoy i Zahida Hina nilaza mazava , dia mpitsijo lavitra.
B. P. Singh dia nanandratra an'i Manto tamin'izao teny manaraka izao :
@navedjaved : Mahatsiaro ilay mpanoratra iray lehibe sy nahay tamin'ny fotoan'androny , Saadat Hasan Manto tamin'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany- RIP ry olo-malaza!
@manish0891 : Fahatsiarovana ny faha 100 taonan'i Saadat Hasan #Manto, iray amin'ireo mpanoratra sombin-tantara foronina amin'ny fiteny Urdu .
@osamamotiwala : Saadat Hasan Manto, na dia mijanona ho tsiaro ihany aza ianao , misy kosa ireo tsiaro izay maharitra mandrakizay. Mamirata ihany ianao ilay diamondra .
Tsy mba natahotra izany i Manto tamin'ny fanehoana ny heviny . Efa niakatra fitsarana noho ny asa sorany izy. Kanefa , i Manto dia tsy nanoratra afa-tsy izay hitany ihany. Nazir Ahmed Minto dia nilaza fa:
@NaveedaV : Janam din mubarak (Tratry ny fitsingerenan'ny nahaterahanao ) Saadat Hasan Manto! lehilahy izay tsy nijery ny tombotsoany manokana . *jaam chalkaoing*
@NaveedaV : Tratry ny fitsingerenan'ny nahaterahanao ianao ry Saadat Hasan Manto! lehilahy izay tsy nijery ny tombotsoany manokana .
Notolorana fandrakofana manokana tao amin'ny filazam-baovao tao Pakistana mihitsy i Manto (amin'ny teny anglisy, jereo ny : DAWN, THE NEWS). Mendrika ny ho deraina izany tranga izany matoa lazaina . Ary na dia efa nitombo be aza ny fanarahana an-jambany tao amin'ny fiarahamonina, mbola velona hatrany ny feon'i Manto .
@Ahmed_Shakeel : Mampihetsi-po be ny mahita ny fahazato taonan'ilay fahaterahanà mpanoratra sombin-tantara foronina amin'ny teny Urdu, Saadat Hasan Ahitana an'i Manto, nahazo fandrakofana manokana sy goavana, indrindra indrindra fa tany amin'ny filazam-baovao tsy mampiasa ny teny Urdu.
Vakio amin'ny teny বাংলা, Português, Español, English